Dhizaini & Raira Yakakwira Yemhando Yakasarudzika Yakagadzirwa Yakanaka Zvishongo Popular Jewelry
Kushandura Pfungwa Dzakaitika Kubva Muna 1988
Nemakore anopfuura 28 eunyanzvi muindastiri, kambani yedu yakarongedza akawanda akasiyana ehunhu hwemhando dzakanaka dzezvishongo zvakanaka zvevatengi vedu. At Popular Jewelry, tinodada nemagadzirirwo edu uye tinotenda kuti iyo nzira inotorwa kupedzisa chidimbu chimwe nechimwe chakakoshawo sezvishongo pachazvo. Kubvira panguva yatinokanda simbi yakanyungudutswa, kusvika ikozvino isu tinopedzisa kupedzisa kwakapetwa pane icho chidimbu - hapana chechipiri chehunyanzvi hwekunyora chakarasika. Boka redu revanyanzvi richashanda newe zvine hunyanzvi kuronga zvishongo zvawanga uchirota. Kubva kuma Nameplates, kubva kumabhandi emabhandi, kune muromo une ndarama nedhaimani- isu tichapfuudza pfungwa dzako kuzviita anokosha simbi - funga nezvayo seyedu chaiyo King Midas kubata.
Dhizaini & Gadzira Yako Yega Zvishongo
Kazhinji, tinokurudzira kuti ufunge nezve mibvunzo inotevera inokosha:
1. Ndeupi mhando yesimbi inokosha iwe yaunofarira kuti ive nechinhu chakagadzirwa mukati?
Muenzaniso: (Platinamu, Goridhe [24K, 22K, 18K, 14K, 10K], sirivha)
2. Ndeupi ruvara?
Semuenzaniso: (Goridhe Yero, Goridhe Ichena, Goridhe Ichena, Dema, nezvimwewo)
(Kwese pamusoro / Zvimwe zvikamu)
3. Rudzi rwemanyorero (s) kana pepuru / kupedzisa (es) iwe yaunoda pane yako chidimbu:
Muenzaniso: Kupera kwePolish, Satin Kupedzisa, Kubhururuka Kupedzisa, Hammered Finish, Wire Brushed, Sandblasted Finish, nezvimwe.
4. Izvo zviyero (zvinogona kunge zvakaenzana) zvechinhu zvacho
Muenzaniso: (Kureba x Upamhi x Kudzika) mamirimita kana masendimita
5. Mabwe ematombo
• Irudzi rudzi rwemabwe?
• Guru rimwe nerimwe rakakura sei?
Unoda kuti vaende kupi?
• Ndeipi maitiro ekunyora?
Semuenzaniso: Vhara Letter / script
• Inofanira kuti chii?
Semuenzaniso: Madheti, ekutanga, Mazita, Quotes, nezvimwe (Ndokumbira uzive nzvimbo iripo inobvumidzwa nehukuru hwezvishongo zvauri kuraira)
Tsika-dzakagadzirwa grill itsika seyakagadziriswa zvidimbu kuwana (zvakanaka rombo rekuwana munhu ane meno ako anowirirana!) Kuti uwane rumwe ruzivo nezve kuve netsika yegoridhe meno (Grill) yakagadzirwa, unogona kushanyira redu rakazvitsaurira peji.
Kuti isu tigoenderera mberi nekubatsira iwe, tinokurudzira kuuya kune kwedu nzvimbo mu NYC's Chinatown. Huya uende newe zano rako (s) uye chero mhando dzakakodzera, mifananidzo kana zvirahwe zveizvo. Mukuwedzera, iwe unogona kufona (212) 941-7942 kana kutitumira e-mail pa info@popular.jew jewelry kuendesa kubvunza kana kukumbira mutero. Tinotarisira kugadzira chinhu chakakosha newe.